SEO PowerSuite: 5 Siyaabood oo Degdeg ah oo Natiijooyin loogu helo Milkiileyaasha Goobta Mashquulsan | Martech Zone
Sabtida, Juun 18, 2016 Isniin, Oktoobar 18, 2021 Aleh Barysevich
Suuqgeynta dhijitaalka ahi waa weji suuq geyn ah oo aanad iska indho tiri karin - asalkiisuna waa SEO. Waxaad u badan tahay inaad ka warqabto saameynta ay istiraatiijiyad wanaagsan SEO ku yeelan karto astaantaada, laakiin suuq ahaan ama milkiilaha goobta, diiraddaadu badanaa waa meelo kale, sameynta SEOna mudnaanta joogtada ah way adkaan kartaa. Xalku waa in laga faa’iideysto barnaamijyada suuq geynta dijitaalka ah ee dabacsan, karti badan leh, oo waxtar badan leh.
Ku qor SEO PowerSuite - liis buuxa oo ah qalab loogu talagalay in lagu kordhiyo SEO-gaaga. Qoraalkan, waxaan ku soo bandhigi doonnaa shan dariiqo oo aad ugu adeegsan karto SEO PowerSuite si aad u xoojiso magacaaga SEO.
Hubso inaad heli karto
Haddii aad rabto in boggaaga la muujiyo oo si wax ku ool ah loo qiimeeyo, waxaa muhiim ah in sida ugu fudud ee suurtogalka ah looga dhigo Google inay dhex gurguurto oo ay ogaato waxa ku jira. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, qaab dhismeedka goobta ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya tusmeynta. Si fudud, websaydhyada leh qaab macquul ah ayaa u fudud mashiinnada raadinta si ay u gurguurtaan oo ay u kala sarreeyaan.
Isticmaalka SEO PowerSuite, waxaad go'aamin kartaa tayada qaab dhismeedka goobtaada. Qodobo kala duwan ayaa soo gala ciyaarta - tusaale ahaan, bogagga muhiimka ah waa in laga heli karaa bogga guriga, iyo qoraallada blogku waa inay isku xirmaan marka ay macno ahaan quseyso. Waxaad isticmaali kartaa SEO PowerSuite ee Hantidhawraha Shabakadda si aad u hubiso waxyaabahaas.
Si fudud u tag aaladda Hantidhawrka Websaydhka, oo guji kan Pages qaybta. Kadib, eeg Iskuxirayaasha Gudaha Ee Bogga tiir si aad u ogaato bogagga ku yaal boggaaga oo aan lahayn xiriiriyeyaal gudaha ah oo iyaga tilmaamaya.
Tani waxay asal ahaan ku siin doontaa liistada waxqabadka leh ee qoraallada iyo bogagga taas oo ay tahay inaad u hesho siyaabo aad ugu xirmi karto meelaha kale ee boggaaga.
Hubi in Boggaga Weyn ee Muhiimka ahi ay si dhakhso leh ugu buuxsamaan
Xawaaraha degelku wuxuu saameyn weyn ku leeyahay darajada laba sababood:
Xawaaraha goobta waa qodob qiimeyn ah, oo macnaheedu yahay degellada gaabiska ah guud ahaan waxay ka hooseeyaan.
Xawaaraha bartaada ayaa saameyn toos ah ku leh heerka soo-kabashada.
Google iyo matoorada kale ee raadinta waxay muhiimad weyn siiyaan calaamadaha khibradaha isticmaalaha. Mid ka mid ah calaamadaha noocan oo kale ah ayaa ah heerka boodboodka, kaas oo si baaxad leh u saameyn kara xawaaraha goobta - dadka badankood waxay sugi doonaan oo keliya dhowr ilbiriqsi (ugu badnaan) goobta ay ku shubaneyso ka hor inta aysan boodboodin.
Adiga oo adeegsanaya Hantidhawrka Websaydhka, waad garan kartaa bogagga ku yaal websaydhkaaga oo si tartiib tartiib ah u socda. Booqo Hantidhowrka Bogga moduleka Qalabka Hantidhawrka Websaydhka, oo hubi qaybta xawaaraha bogga si aad u aragto haddii bogaggaagu ka gudbaan tijaabooyinka xawaaraha Google:
Markaad ogaatid boggaga si tartiib ah u rarmaya, waxaad qaadi kartaa tillaabooyin aad ku saxdo arrimaha.
Hubi Xiriirka Khatarta Ciqaabta
Xidhiidhada tayada-hooseeya waxay boggaaga gelin karaan halis ciqaab Google ah, taas oo ah marka loo eego SEO, waa riyadaada ugu xun. Haddii aad rabto inaad ka fogaato ciqaabta Google, waxaad u baahan tahay inaad awood u yeelato inaad ogaato xiriiryada waxyeellada leh oo aad qaaddo tallaabooyin aad ku dhexdhexaadin karto.
Iyadoo SEO PowerSuite's SEO SpyGlass, waxaad si otomaatig ah ugu ogaan kartaa xiriiriyeyaasha waxyeellada leh boggaaga 'backlink profile' kana hortagi kartaa ganaaxyada xiriiriyaha Google.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad aado aaladda SEO SpyGlass oo geli goobtaada. Kadib, tag tabta Ciqaabta Xiriirka oo guji qaybta Backlinks, oo laga helo dhinaca bidix Halkaas, waxaad ka heli doontaa tiro badan oo istaatistikada muhiimka ah, oo ay ku jiraan 'khatarta ciqaabta' ee boggaaga oo dhan.
Hoos waxaa ku yaal imtixaan deg deg ah oo loogu talagalay Martech Zone. Sida aad u aragto, ma jiraan wax khatar ah oo Ciqaab ah, oo si fiican loo qabtay!
Inta ugu fiican oo dhan, waxaad ku hubin kartaa halista ciqaab ee xiriiriyeyaashaada hal guji. Marka, ha ahaato xiriir shaqsiyeed ama koox gadaal gadaal ah, waxaad ku arki kartaa halista ciqaabtaada taabashada badhan.
Tijaabi Tijaabada Saaxiibtinimo ee Mobilka
Maaddaama raadinta moobiilku bilaabmayso inay u dhigmaan tirada raadinta desktop-ka, saaxiibtinimada moobiilku waxay hadda noqotay qaddar yar oo darajayn ku ah Google iyo makiinadaha kale ee raadinta. Si kale haddii loo dhigo, haddii bartaada internetka aan loogu talagalin moobiilka, waxay si xun u saameyn kartaa darajadaada (oo aan ku xusin khibrada isticmaale).
Waxaad u adeegsan kartaa Hantidhawrka Websaydhka si aad ugu sameyso tijaabo moobiil ku habboon boggaaga, si aad u hubiso haddii ay dhaafayso heerarka Google. Haddii bartaada aysan ku guuleysan imtixaanka, waxaad heli doontaa talooyin ku saabsan sida looga dhigi karo bartaada mid mobiil ah - tusaale ahaan, akhristaha maahan inuu ku soo dhawaado ama ku dhex wareego aaladda moobaylka si uu u akhriyo boggaaga waxyaabaha uu ka kooban yahay.
Tag meesha Xisaabaadka Goobta qayb ka mid ah qalabka Hantidhawrka Websaydhka si loo hubiyo bartaada.
Haddii goobtaada aysan si wanaagsan u dhalin, xalka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ayaa ah in dib loo qaabeeyo mareegahaaga si uu u noqdo mid wax -qabad leh (haddii uusan hore u jirin). Maalgelinta naqshadeynta-gaar ahaan naqshadeynta saaxiibtinimo-gacmeed-waxay ku bixin kartaa saamiyada natiijooyinka SEO.
Samee Hantidhowrka Goobta
Waxaa jiri kara arrimo xasaasi ah oo ku saabsan websaydhkaaga oo aadan si fudud uga warqabin, ama aadan haysan waqti aad ku ogaatid naftaada. Kuwani waxay saameyn ku yeelan karaan awoodda goobtaada iyo derajadooda. Isticmaalka SEO PowerSuite, waxaad marin uga heli kartaa aaladaha, sida Xisaabaadka Goobta qalab, kaas oo si otomaatig ah u tilmaami kara arrimaha muhiimka ah ee bartaada.
Si aad u samayso xisaab hubin dhamaystiran oo goobta ah, fur Appka Hantidhawrka Mareegta, oo billow iskaanka boggaaga adoo isticmaalaya Xisaabaadka Goobta qalab:
Qalabkani wuxuu si otomaatig ah u ogaadaa wixii arrimo farsamo ah ee hoos u dhigi kara qiimeyntaada, wuxuu ku barayaa sida loo xalliyo arrimaha, wuxuuna kuu sheegayaa wixii ku saabsan dhibaatooyinka bogga. Waa wax qurux badan.
SEO waxay saameyn weyn ku leedahay noocaaga oo ay adag tahay in la iska indhatiro. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ku dhibtooneysid inaad mudnaanta siiso ololahaaga SEO, hubi SEO PowerSuite qalabkiisa wax ku oolka ah.
Waxay hagaajinayaan hannaanka SEO, iyaga oo kaaga dhigaya mid aad uga fudud oo dhaqso badan inaad ku aqoonsato wixii arrimo ah ee laga yaabo inuu boggaaga haysto, ugu dambayntiina waxay kaa caawin kartaa inaad sare u qaaddo darajada boggaaga.
Isticmaalka SEO PowerSuite, waad awoodaa
Hubso in bartaadu tahay si fiican u habaysan
Hubi in boggaaga si dhakhso leh ayuu u rartaa
Hubi bartaada khatarta ganaaxa gadaal
Dhallin a saaxiibtinimo guurguura imtixaanka
Samee a hantidhawrka goobta oo buuxa
Xaqiiqdii waxaan hada ku taabnay caarada barafka maqaalkan, laakiin waxa kor ku xusan waa inay kugu filan yihiin inaad la qabsato! Waad awoodaa ku soo dejiso SEO PowerSuite bilaash boggayaga rasmiga ah.
Ku soo dejiso SEO PowerSuite Bilaash!
Daah-: Martech Zone ayaa adeegsanaya Awoodda SEO xiriiriye ku xiran maqaalkan.
Tags: backlink xisaabintakhatarta ganaaxa gadaalkhatarta isku xidhkasaaxiibtinimo guurguuraimtixaanka wareegapoweruiteayna search engineSEOolole seoawoodaha seoqaab dhismeedkahanti dhowrka goobtahanti dhawraha boggaxawaaraha websaydhka
Baaragaraafka koowaad runtii guriga ayuu ku dhacaa. Milkiilayaasha meheraddu waxay ku mashquulsan yihiin socodsiinta meheradaha suuqleyduna waxay ku mashquulsan yihiin sii wadista bustayaashaas. Dhammaantood waxay leeyihiin arrimo deg deg ah oo ay uga qayb galaan marar badan oo aan mudnaanta la siin SEO. Diirad saariddu runti waa mid dhib badan oo siyaabahan aad wadaagtay ayaa runtii ku habboon kuwa ku habboon kuwa kaliya waqti yar ku darsaday SEO laakiin wali doonaya ereyadooda muhiimka ah ee ku jira darajada
Nov 22, 2016 at 6: 06 AM
Kaliya in la xoojiyo sida ay muhiim u tahay waqtiga rarku, markay dadku riixaan xiriiriye, waxay sugi doonaan ilaa shan ilbidhiqsi bogga si sax ah loo soo bandhigo ka hor inta aysan riixin badhanka dambe ee boggooda oo ay isku dayaan nasiibkooda natiijada raadinta kale! Ka dhig bartaada mid fudud sida ugu macquulsan uguna Flash-la'aan!